Warbixin sanadeedka Xarunta Xuquuqal Insaanka Somaliland Ee 2020 | Berberanews.com
Home WARARKA Warbixin sanadeedka Xarunta Xuquuqal Insaanka Somaliland Ee 2020
Warbixin sanadeedka Xarunta Xuquuqal Insaanka Somaliland Ee 2020
Hargeysa(Berberanews)-Maanta oo bishu tahay 31 December 2020, Xarunta Xuquuqal Insaanku waxay soo saartay war bixin sanadeedkeedii Xuquuqal Insaan ee sanadka 2020.
· In la joojiyo xadhiga lakula kacayo warbaahinta madaxa banaan.
· In la joojiyo xadhiga alaaba lagula kaco dadka dowlada dhaliila
· In dadka loo ogolaado inay mudaharaadyo isugu imaadaan iyadoo laxaqdhowrayo xuquuqdooda dastuuriga ah.
· In booliska dib u habayn balaadhan lagu sameeyo, lana joojiyo sifoyinka siyaasadaysan ee booliska marar badan loo adeegsado.
· Sidoo kale dowladu waa inay joojiyo dadka danyarta ah ee ay sifaha sharciga khilaadsan dhulalka uga kicinayso.
· Ugu danbayna waa in lajoojiyo meeshana laga saaro xeerka sinada iyo kufsiga lana soo celiyo xeer kii hore xeer lr 2018.
Previous articleDhacdo na kala qabsatay Wiil uu dhalay Madaxwaynaha Somaliland
Next articleHambalyada Madaxweynaha Somaliland Ee Sanadka Cusub 2021